Maka: umphembeleli | Martech Zone
Zingaxhamla njani iiNtengiso zeMidlalo engeyiyo yeMidlalo ngokuSebenza nabaPhembeleli beMidlalo
NgoLwesine, uJuni 24, 2021 NgoLwesine, uJuni 24, 2021 UPaulina Haryacha
Abaphembeleli bemidlalo baya kuba nzima ukungahoyi, kwaneempawu ezingezizo ezokudlala. Oko kunokuvakala kungaqhelekanga, ke masichaze ukuba kutheni. Amashishini amaninzi ahlupheke ngenxa yeCovid, kodwa umdlalo wevidiyo waqhuma. Ixabiso layo liqikelelwa ukuba liya kudlula kwi-200 yezigidigidi ngo-2023, ukukhula kuxhotyiswe yi-2.9 yezigidigidi zabadlala umdlalo kwihlabathi liphela ngo-2021. Ingxelo yeMarike yeMidlalo yeHlabathi ayingomanani kuphela anomdla kwiimveliso ezingezizo ezokudlala, kodwa inkqubo eyahlukeneyo ejikeleze umdlalo. Ukwahluka kudala amathuba okubonisa
Iindlela ezi-7 zempembelelo yokuThengisa kulindeleke ngo-2021
NgoLwesithathu, Juni 9, 2021 NgoLwesithathu, Juni 9, 2021 Alexander Frolov
Njengokuba umhlaba uvela kwindyikitya yokufa kunye nasemva kwesiphelo salo, intengiso yempembelelo, ngokungafaniyo neninzi yamashishini, iya kuzifumanisa itshintshiwe. Njengabantu abanyanzelwayo ukuba bathembele kwinto ebonakalayo endaweni yamava omntu kwaye bachitha ixesha elininzi kuthungelwano lwentlalo endaweni yeziganeko zomntu kunye neentlanganiso, intengiso yempembelelo ngequbuliso yazifumana iphambili kwithuba lemveliso ukufikelela kubathengi ngokusebenzisa imidiya yoluntu inentsingiselo kwaye iyinyani
Ngaphandle kwesikrini: Ngaba iBlockchain iya kuyichaphazela njani intengiso yeFluencer
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 10, 2021 NgoMgqibelo, ngo-Epreli 10, 2021 UMat Dyer
Xa uTim Berners-Lee wayila iWebhu eBanzi yeHlabathi ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo, ngekhe abone kwangaphambili ukuba i-Intanethi izakuguquka ibe yinto ekuyo namhlanje, etshintsha indlela umhlaba osebenza ngayo kuwo onke amabakala obomi. Ngaphambi kwe-Intanethi, abantwana babenqwenela ukuba ngoosomajukujuku okanye oogqirha, kwaye isihloko somsebenzi wempembelelo okanye umyili womxholo babengekho. Ngokukhawuleza phambili namhlanje kwaye phantse iipesenti ezingama-30 zabantwana abaneminyaka esibhozo kuye kwishumi elinambini
IDroppTV: Sebenzisa i-AI ukuChonga nokuThengisa iimveliso kwiiVidiyo
NgoLwesibini, Oktobha 20, 2020 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 Douglas Karr
Iimpawu zisebenzisa ngakumbi itekhnoloji yokudala amava amatsha okuthenga ngexesha lokuhlala-ekhaya. Kwaye, kwangaxeshanye, icandelo lezolonwabo liyanyanzelwa ukuba likhangele eminye imithombo yengeniso ngexesha apho iithiyetha kunye neendawo zomculo zivaliwe. Ngenisa i-droppTV, iqonga lokuqala lokusasaza elithengiswayo. Ukuxoxa ngeevidiyo zomculo, i-droppTV ivumela abaphulaphuli ukuba babukele umxholo ngelixa bekhangela ngaphandle komthungo iivenkile ezihlangeneyo zokuthenga iimpahla ezinesitrato. Iqonga lenza abadali (kunye neempawu) ukuba benze imali
Tuesday, October 20, 2020 Monday, January 18, 2021
Yeyiphi imibuzo ekufuneka iphendulwe kuvavanyo lweQhinga leNtengiso yeNkampani yakho?
NgoLwesithathu, nge-29 kaJanuwari 2020 NgoLwesine, uJanuwari 30, 2020 Douglas Karr
Ndisebenza nethemba ngoku elaziyo ukuba bafuna uncedo kubukho babo bedijithali kunye neenzame zokuthengisa ngaphakathi ... kodwa abazi ukuba baqale ngaphi kwaye akukho ndlela iyimfuneko yokufikelela apho bafuna khona. Ngelixa ndibhale kakhulu malunga nohambo lwe-agile yentengiso yokuphuhlisa ukukhula kwakho kwintengiso, andiqinisekanga ukuba ndikhe ndabhala malunga nezinto eziyimfuneko kwimpumelelo. Njengoko ndisebenza nalo mthengi, bendinodliwanondlebe neentengiso zabo, ukuthengisa, kunye